नबुको शब्दघर: जलवायू परिवर्तनको असर मौरीमा पनि देखियो
कास्कीको चापाकोटका किसान मौरीपालनतर्फ आकर्षित
परम्परागत मूढे घार
आधुनिक घारबाट मौरी निकालेर देखाउँदै किसान
पछिल्लो समय मौरीमा पनि जलवायू परिवर्तनको असर देखिन थालेको छ । जलवायू परिवर्तनले गर्दा समयमै फूल फूल्न छाडेको र माहुरीलाई खानाको कमि भएकाले पहिलेको जस्तो मह उत्पादन नहुने मौलिपालक किसानले बताएका छन् । चाहिनेभन्दा बढि तापक्रम भएका कारण मौरी मर्ने, चरनमा ननिस्कने, मह उत्पादन नहुने जस्ता समस्या देखिएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
मौरीका चाकामा काम गदर्दै कामदार मौरी
यसैबीच, कास्कीको चापाकोट गाउँ विकास समितिका स्थानीय बासिन्दा मौरीपालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन् । केही बर्ष अगाडी चापाकोट घाँटिछिनाका स्थानीय टङ्क प्रसाद पराजुलीले सुरु गर्नुभएको मौरीपालन व्यवसायलाई अहिले यहाँका अधिकांश किसानले पछ्याएका हुन् । अन्य व्यवसाय जस्तो झन्झटिलो नहुने र दिनहुँ स्याहार गर्नु नपर्ने भएकोले पनि मौरीपालन व्यवसायतर्फ लाग्ने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ ।
अहिले चापाकोटका करिब २ सय घरमा मौरीपालन गरिएको छ । गाउँघरमै उत्पादित मह गुणस्तरिय हुने भएकाले महका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको किसान पराजुलीले बताउनुभयो । चापाकोटमा उत्पादित मह प्रतिकिलो ५ सय रुपैयाँमा पोखरामा बिक्री हुने गरेको छ । यहाँका मौरीपालक किसानले एक घार मौरी बेचेबापत ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । विगत ५ बर्षदेखि मौरीपालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएका किसान पराजुलीले मात्रै गएको १ बर्षमा ८० किलो मह उत्पादन गर्नुभएको छ । यस्तै, ८० घार मौरी बेचेर अहिलेसम्म ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाएको उहाँले बताउनुभयो ।
Posted by News Admin at 8:48 PM
Labels: देशमा के के हुँदैछ ?
प्रल्हाद बाँस्तोला September 25, 2011 at 6:40 AM
हैन जलवायू परिवर्तन तहल्कै मच्चाउँदो रहेछ त ?
News Admin September 25, 2011 at 6:43 AM
हिमालको हिउँ पग्लनेदेखि लिएर जीवजन्तु लोप हुने लगायत सबै लक्षण जलवायू परिवर्तनका हुन् ।